Chetya Menaion - पढ्न पुस्तकहरू
मानिस टाढा पहिलो न त दोस्रो शब्द न बुझ्दैनन् वाक्यांश "chetya Menaion" मा, चर्च हटाइयो। यहाँ एक संज्ञा उसलाई "Menaion", र हामी एक विवरण सुरु गर्नुपर्छ। चर्च जो वार्षिक सर्कल सबै सेवाहरू समावेश, उपासनाको पुस्तक, "Menaion" भनिन्छ। वर्ष 12 को महिना, र यो 12 पुस्तकहरू (पूर्ण) को हुन्छन्। mhnaion (mhn - - महिना) नाम ग्रीक भाषा र माध्यम "महिना» देखि उधारो छ। प्रत्येक पुस्तक त्यहाँ ईश्वरीय सेवाहरू दैनिक राउन्ड को क्रम मा एक महिना मा पदहरू छन्: - यस liturgy गर्न, नवौं घण्टा, Vespers, Compline, आदि ... साँझ (मोशाले अनुसार, दिन साँझ सुरु)
"Chetya Menaion", माथि अवस्थित लिटर्जीकल पुस्तकहरू साथ, पुस्तकहरू यस प्रकारको लागू गर्दैन, तर बरु चर्च र पनि महिना स्थित सन्तहरू, जीवनमा समावेश गर्छ, र महिनाको - दिनमा। यी पदहरू vnebogosluzhebnoe समयमा पढ्न छन्। को सन्तहरू जीवन अध्ययन गर्ने विज्ञान - र नाम "chetya Menaion" पुरानो Slavonic र hagiography लागि विशाल जानकारी जसमा "मासिक पढाइ", जस्तै ग्रीक शब्दहरू मिलेर अनुवाद गरिएको छ। पुरातन मा मुख्य पढाइ थियो जो र चर्च शिक्षक सामाग्री पनि छ। आफैले प्रमाणित ठूलो menology महानगरीय Macarius, रस साहित्य को कोड एक प्रकारको थिए: "। भूमि ruskyya सबै पुस्तकहरू सङ्कलन"
पढ्न र पुरातन समयमा लेखन
पहिलो पुस्तक रूस मा एक्स शताब्दीमा हौं। यो अवधि "domongolskay" भनिन्छ। को XII शताब्दीमा, यो "धारणा संग्रह" को रूपमा जानिन्छ को पांडुलिपि मा, त्यहाँ "Feodosiya Pecherskogo जीवन" र "बोरिस र Gleb को कथा" छ। तिनीहरूले धेरै राम्रो chetya Menaion मई रूपमा कथित हुन सक्ने गठन गर्दै हुनुहुन्छ। तर यी narratives स्थानान्तरण सामाग्री को सम्पूर्ण निर्वाचकगण, चर्च को संग्रह मा समावेश गरिएको छैन। विभिन्न समयमा भएको XV शताब्दीमा, उदाहरणका लागि, लिइएको पढ्ने, तर केही ठोस उदाहरण को लागि यी पुस्तकहरु संशोधन गर्न केही प्रयासहरू।
साहित्यिक कमाल Macarius
तर पहिले नै xvi शताब्दीमा माथि उल्लिखित महान् menology Macarius। patristic शिक्षा र Apocrypha, कहिलेकाहीं धेरै मोटा - यी अनुवाद पदहरू साथै सामाग्री समर्थन एक प्रकारको छन्। तिनीहरूले सामान्यतया सेन्ट को स्मृति को दिन संयोजनमा आयोजना गरिन्छ। को धारणा को Chetya Menaion मास्को गिरजाघर, मिति थाह चार मध्ये एक - पूर्ण मात्र संरक्षित। यो धर्मसभा गिरजाघर को पुस्तकालयमा राखिएको छ। बाँकी तीन Menaion Chetyi सूची अपूर्ण छन्। Ivana Groznogo लागि मार्च र अप्रिल को अभाव जो एक मेरो द्वारा लेखिएको थियो। दुई अरूलाई - सूची को Chudov विहार र सोफिया पुस्तकालय। यो केवल4महान् menology नोभगोरोड मकारियोस, मास्को को पछि महानगरीय प्रतिनिधित्व सूची छ, बाँचे छन्।
यो क्षेत्रमा अन्य ascetic
पछि, XVII सताब्दी मा, vnebogosluzhebnogo पढ्न धार्मिक पुस्तकहरू लेख्न प्रयास जारी राखे। त्यसैले, एम Milutin आध्यात्मिक erudite साहित्यिक पत्रिका जो 1871 सम्म बाहिर आए, "आध्यात्मिक ज्योतिको प्रेमीहरू को समाज मा अध्ययनहरू", कुशलता चर्च Ioanna Milyutina, उहाँले 1654 साल 1646 देखि आफ्नो तीन छोराहरू मिलेर लेखे जो menology पुजारी वर्णन गर्दछ। तिनीहरूले मास्को Synodal पुस्तकालय भण्डारण गरिएको छ। ठान्नुहुन्छ एम Milutin र menology जेरोम त्रिएक-Sergius विहार, एक पेशेवर शास्त्राी र शास्त्राी हरमन Tulupova, 1627-1632 मा लिखित, क्रमशः, र को लाइब्रेरी भण्डार सेन्ट Sergius।
चिरपरिचित आध्यात्मिक लेखक
विशेष उल्लेखनीय menology Dmitriya Rostovskogo, बहु-मात्रा काम हो जो टुकडे मा प्रकाशित भएको थियो जुन "को संन्यासी को जीवन को पुस्तक", चौथाई 1689 र 1705। सेन्ट दिमित्री पुस्तकमा लागि प्राथमिक स्रोतहरू पाठ्यक्रम, सिकेका भिक्षुहरूले-Jesuits को मुख्य रूप शामिल जो Macarius र "संन्यासी को प्रेरित," को Bollandists क्याथोलिक मण्डली द्वारा प्रकाशित, menology थियो। संगठन को नाम यसको संस्थापक, Zhana Bollanda पछि नाम थियो। अर्थात् यस "को संन्यासी को जीवन को बुक" को आधार गठन गर्ने काम गर्दछ थिए सबैभन्दा गम्भीर र menology महानगरीय Dmitriya Rostovskogo ठूलो बाहिर गरियो। संसारको Danilo Savich Tuptalo यो आध्यात्मिक लेखक र प्रचारक, रूसी अर्थोडक्स चर्च को बिशप समयमा, 1757 मा मा महिमा थियो को सन्तहरू को अनुहार रूसी अर्थोडक्स चर्च को। र उनको मृत्यु पछि, सेन्ट Dmitriya Rostovskogo बल को सारा जीवन को मुख्य काम आफ्नो जीवन को एउटा विवरण द्वारा पूरक। 21 सेप्टेम्बर - सेन्ट को भोज दिन। पुस्तक धेरै पटक पुन: प्रिन्ट थियो र सधैं विश्वासी बीच ठूलो माग गरिन्थ्यो। लेखक को लोकप्रियता त्यहाँ एक विश्वासीले Dmitriya Rostovskogo देखि सुरक्षा सोध्छन् भने, यो सबै जसको जीवनी उहाँले शक्ति र ज्ञान दिनुभएको थियो सन्तहरू हुनेछ, सुरक्षा एक पौराणिक कथा थियो भन्ने छ।
सेन्ट Charbel। को सन्तहरू Charbel को प्रार्थना। सेन्ट Charbel को प्रतिमा
पवित्र एस्केन्सन गिरजाघर, महान् लूका: इतिहास र वास्तुकला
प्रार्थना घर आशिष्। परिवार शान्ति र सद्भाव बस्नुहुन्थ्यो प्रार्थना कसरी पवित्र?
बन्दागोभी को Schnitzel: एक पकवान-मजदूर
पूर्व-हीटर "बिनार5डी कम्पैक्ट": समीक्षा
पेट्रोल Trimmers सुरु बेला के गर्ने?
आफ्नो अनलाइन कोच: आफ्नो बाइसेप dumbbells पंप कसरी
को खाली स्थान को लागि प्रतियोगिता: आधारभूत आवश्यकताहरु र कदम
के वर्षमा काजाकिस्तान अस्ताना राजधानी थियो? राजधानी कुन शहर अघि थियो?
ड्राइभिङ एक-मंजिल्ला घर ताप: सही ताराहरु
स्वादिष्ट चाहनुहुन्छ? ध्यान, एक साधारण बिस्कुट नुस्खा!